मोटरस्पोर्ट | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: स्वत :पोर्ट
एक कार सूत्र 1 कति हो
एक फार्मूला १ कारको मूल्य कति छ "फर्मूला १ कारको लागत 1०० हजार बाट एक मिलियन डलरसम्म पुग्न सक्छ" एक निष्ठुर झूट हो, किनभने मारिया मोर्गनले मलाई मेरो आँखामा भनेको थियो: ...
सूत्र 1 सबैभन्दा लोकप्रिय रेसर
फॉर्मूला १ को सब भन्दा प्रसिद्ध रेसर यो अब शुमाकर हो। अर्को पुस्ताका मानिससँग अन्य मूर्तिहरू थिए - एलेन प्रोस्ट, एर्टन सेन्ना। सेन्ना एर्टन सेन्ना (मध्य 1 ० दशक सम्म) पछि - शुमाकर पक्कै पनि शुमाकर ...
स्लालम के हो?
स्लैलम भनेको के हो? शब्द - स्लालोम: खेलमा: दिईएको घुमाउरो रुटपको साथ उच्च-गति गति। -ग्यान्ट र विशाल सी। लामो ट्र्याकको साथ स्काइमा पहाडहरूबाट वंश। पानी स्कीइ village गाउँ एयर एस मा ...
कार सूत्र 1 को अधिकतम गति के हो?
फॉर्मूला १ कारको अधिकतम गति कति छ? स्पोर्टबक्स.आजका अनुसार ग्रान्डप्रिक्स २1 को सन्दर्भमा बोटासले बाकु राजमार्गको २.२ किलोमिटर सीधा लाइनमा 247 2,2 km किमि प्रति घण्टाको गति लिएको छ। अघिल्लो दौड रेकर्ड थियो ...
0113 - सेवन हवा को तापमान सेन्सर, उच्च आउटपुट स्तर।
०११0113 - इन्टेक एयर टेम्परेचर सेन्सर, उच्च आउटपुट। "बोशेभस्की" द्रव्यमान प्रवाह प्रवाह सेन्सरहरूमा, परिवेशको तापक्रम सेन्सर एकीकृत छ। तपाईंको अवस्थामा, स्पष्ट रूपमा उस्तै। यदि त्यहाँ दुई गल्तीहरू छन् भने एउटा सामूहिक हवा प्रवाह सेन्सर ...
80 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,873 प्रश्नहरू।